Kinemaster - Ứng Dụng Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: Kinemaster – Ứng Dụng Chỉnh Sửa Video Chuyên Nghiệp | Muasalebang in Muasalebang
Ngohlelo lokusebenza lwamahhala lwe-Kinemaster, ungahlela futhi uhlele amavidiyo ochwepheshe anezici zokwengeza imiphumela, ukukopisha, ukuxuba imibala, ukufanisa ingemuva, … ngezinyathelo ezimbalwa nje ezilula nezisheshayo. ocingweni lwakho, ithebhulethi esikhundleni sokusebenzisa ikhompuyutha. . Ake sifunde noNguyen Kim yonke imisebenzi nokuthi ungayilanda kanjani i-Kinemaster ye-iPhone, i-iOS ngisho naku-PC ngesihloko esingezansi!
1 Yini i-Kinemaster?
1.1 Ulwazi Lokusebenza
2 Izici ezivelele ze-Kinemaster
2.1 Isiqophi Sevidiyo Esinamandla
2.2 Khipha futhi ulondoloze ividiyo yekhwalithi ephezulu
2.3 Iyakwazi ukuhlela ividiyo eyisisekelo kanye nekholaji
2.4 Yabelana ezinkundleni zokuxhumana
3 Ungayilanda kanjani i-Kinemaster yefoni yakho
3.1 Ungayilanda kanjani i-Kinemaster kumafoni we-Android
3.2 Ungayilanda kanjani i-Kinemaster kumafoni we-iOS we-iPhone
4 Imiyalo yokufaka i-Kinemaster Pro ye-PC, i-laptop
4.1 Indlela yokusika ividiyo
4.2 Ungayifaka kanjani imiphumela yoshintsho kuvidiyo
4.3 Indlela yokukhuluma ngevidiyo
4.4 Ungawufaka kanjani umbhalo kuvidiyo
5 Engeza umculo kuvidiyo
5.1 Londoloza ividiyo
5.2 1. Ingabe i-KineMaster ingafakwa ku-iPad?
5.3 2. Yimuphi umkhawulo omkhulu wokuthekelisa amavidiyo kuhlelo lokusebenza lwesilingo se-KineMaster?
5.4 3. Indlela yokufaka i-KineMaster kukhompyutha ephathekayo noma ideskithophu?
5.5 Ungayifaka kanjani i-KineMaster Pro kumafoni we-Samsung?
I-KineMaster i uhlelo lokusebenza lokuhlela ividiyo pro mahhala kumapulatifomu amabili adumile, i-Android ne-iOS. Uhlelo lokusebenza lunezici ezigcwele ezisekela ukunqampuna, ukuhlela ividiyo, ukwengeza izithombe, umbhalo, imiphumela, ukukopisha, … okwenza ukudala ividiyo kuthakazelise kakhulu.
Ngomhleli weKineMaster bangahlela noma yiluphi uhlobo lwevidiyo abalufunayo ocingweni lwabo, I-iPad ngisho I-PC. Futhi kulula ukwabelana nezinkundla inethiwekhi Yokuxhumana njenge-Facebook, Instagram, Google+, Youtube…
Umshicileli: I-KineMaster Corporation.
Uhlobo lohlelo: Ukubuka nokuhlela ividiyo.
Okulandiwe kwamanje kungaphezu kwezigidi ezi-4 (kusukela ngoMeyi 2021)
Usayizi: iOS 128MB, Android mayelana 97MB
Inkundla: I-Android 6.0 noma eyakamuva, i-iOS 12.4 noma eyakamuva, noma i-iPadOS 12.4 noma eyakamuva (amadivayisi e-iPad)
Izilimi ezisekelwayo: IsiNgisi, isiThai, isiFulentshi, isiJalimane, iSpanishi, isiKorea, isiVietnam…
Inani: Kumahhala ukuze kuhlolwe.
I-Kinemaster ingesinye sezinhlelo zokusebenza ezinezici ezigcwele zokuthi uhlele futhi uhlele amavidiyo kalula nangempumelelo. Uhlelo lokusebenza lwamahhala lwamadivayisi we-Android.
Izici ezivelele ze-Kinemaster
Isiqophi Sevidiyo Esinamandla
Rekhoda ividiyo nomsindo ngezihlungi ezinemibala ehlukahlukene kanye nemiphumela eyakhelwe ngaphakathi. Abasebenzisi bangathatha izithombe ezinhle noma amavidiyo ngaphandle kokulinda ukukhiqizwa kwangemuva.
Khipha futhi ulondoloze ividiyo yekhwalithi ephezulu
Amandla okuthumela amavidiyo anawo Ukulungiswa kwe-HD, i-HD egcwele, i-QHD 4K ukuze uthole izithombe ezibukhali. Zimbalwa kakhulu izinhlelo zokusebenza zokuhlela amavidiyo ezingakhiqiza ividiyo engu-4K 3fps engadlalwa kuyo umabonakude ngaphandle kokugqashuka nokugcoba. Lokhu kwenza i-Kinemaster ihluke.
Iyakwazi ukuhlela ividiyo eyisisekelo kanye nekholaji
Ngamathuluzi okusika uhlaka ngalunye, hlanganisa izendlalelo eziningi, … zihlanganiswe kuhlelo lokusebenza. I-KineMaster isekela izendlalelo eziningi zevidiyo, umsindo, umbhalo, izithombe noma ukubhala ngesandla. Imiphumela, imisindo noma izitikha zenza kube lula kubasebenzisi ukubona imibono yabo.
Yabelana ezinkundleni zokuxhumana
I-KineMaster ifanele abakhangisi, abathengisi, ama-KOL noma labo abathanda ukukhombisa ubuhlakani babo emhlabeni. Ngoba bangabelana ngamavidiyo abo eziteshini zenkundla yezokuxhumana khona kanye endaweni yokuhlela amavidiyo, okubavumela ukuthi bafinyelele izithameli zabo ngokushesha.
Ungayilanda kanjani i-Kinemaster yefoni yakho
Ungayilanda kanjani i-Kinemaster kumafoni we-Android
Isinyathelo 1: Iya ku CH Dlala.
Isinyathelo sesi-2: Thayipha usesho lohlelo lokusebenza lwe-“Kinemaster” kubha yokusesha.
Isinyathelo sesi-3: Cindezela inkinobho . Ukusetha.
Isinyathelo sesi-4: Esikrinini esikhulu, isithonjana sohlelo lokusebenza siyavela. Vula uhlelo lokusebenza bese uqala ukuhlela amavidiyo
Ungayilanda kanjani i-Kinemaster kumafoni we-iOS we-iPhone
Isinyathelo 1: Ku-iPhone yakho, faka I-AppStore.
Isinyathelo sesi-3: Cindezela inkinobho Thola (Thola) khetha okulandelayo Faka (Faka) ukulanda izinhlelo zokusebenza ze-iPhone
Isinyathelo sesi-4: Esikrinini esikhulu, isithonjana sohlelo lokusebenza siyavela. Vula uhlelo bese uqala imisebenzi yokuhlela ividiyo.
Buka Okuningi: Amathiphu okudala amavidiyo angcweti nge-iPhone
Imiyalo yokufaka i-Kinemaster Pro ye-PC, i-laptop
Sebenzisa umhleli wevidiyo ochwepheshe nge isikrini sekhompyutha Okukhudlwana kuzokusiza ukuthi ulawule kalula futhi ulungise imiphumela, usike ngendlela efanele. Kodwa ngenxa yokuthi i-Kinemaster iyisicelo seselula, ukufaka lolu hlelo lokusebenza udinga ukufaka i-emulator yekhompyutha efana ne-Bluestack noma i-Nox Player.
Isinyathelo 1: Landa i-emulator Ama-Bluestacks kuhle Umdlali we-Nox.
Isinyathelo sesi-2: Vakashela i-CH Play ukuze ungene ku-akhawunti yakho ye-Gmail.
Isinyathelo sesi-3: Sesha uhlelo lokusebenza lwe-“Kinemaster” kubha yokusesha
Isinyathelo sesi-4: Cindezela Faka (Faka) ukulanda nokusebenzisa okufanayo nakumaselula e-Android.
>> Bona manje ukuthi uwakhipha kanjani amavidiyo ku-Youtube uwayise kukhompuyutha yakho ukuze ulande umculo we-MP3 noma amavidiyo owathandayo ongawajabulela noma uwahlele nge-Kinemaster.
Indlela yokusika ividiyo
Okokuqala, udinga ukwengeza ividiyo ezosikwa ngokuchofoza isithonjana sokuhlanganisa phakathi nendawo yesikrini sokubonisa sohlelo.
Bese ukhetha isilinganiso sokuboniswa kwevidiyo.
Cindezela inkinobho yemidiya, khetha ifolda equkethe ividiyo ocingweni. Khetha eduze kwevidiyo ofuna ukuyihlela.
Cindezela inkinobho yokunamathela ekhoneni eliphezulu kwesokudla kwesikrini.
Ukhetha ividiyo emugqeni wesikhathi ongezansi bese uchofoza isithonjana sesikere.
Kuleli qophelo, izinketho zizoboniswa, ukhetha imodi yokusika evumelana nezidingo zakho. Uma uthola ukufiphala kokunquma/ukuhlukanisa izinketho, ungakulungisa ngokukhetha ividiyo bese uyihudula uye phambili naphambili. Okunye, ungakwazi ukuhlehlisa osanda kukwenza ngokukhetha inkinobho ethi Hlehlisa, okuwumcibisholo ozungezisayo ophambene newashi ekhoneni elingaphezulu kwesokunxele.
Ungayifaka kanjani imiphumela yoshintsho kuvidiyo
Ngemva kokungeza nokusika amavidiyo, uzobona isikwele esimhlophe esinomugqa oqondile phakathi phakathi kwalawo mavidiyo. Cindezela le nkinobho futhi izinguquko zizovela ngezansi nje kwesigaba Sezinguquko.
Kunemiphumela eminingi ehlukene ongakhetha kukho okuhlanganisa i-3D Transitions, Izinguquko Zakudala, Izinguquko Ezijabulisayo,… Ukhetha inkinobho yokunamathela ekhoneni elingakwesokudla ukuze uqedele ukukhethwa kwemiphumela.
Ukuze uhlole kuqala umphumela, ungahudula ividiyo lapho kunophawu loshintsho bese ucindezela inkinobho ethi Dlala.
Indlela yokukhuluma ngevidiyo
Ungachofoza inkinobho yemakrofoni yezwi ukuze ukhulume ngevidiyo.
Cindezela inkinobho ethi Qala ukuze uqale inqubo yokuqopha.
Uma isiqalile, izingxenye eziveziwe zevidiyo zizogqanyiswa ngokubomvu. Uma ucindezela inkinobho ethi Misa, kuzovela i-waveform ensomi ngezansi kwezingxenye zevidiyo ezigqanyiswe ngokubomvu. Manje ungenza izinketho ezinjengoBuyekeza, Rekhoda kabusha, Iluphu, Ingemuva, Nquma/hlukanisa…
Ungawufaka kanjani umbhalo kuvidiyo
Cindezela inkinobho Yezendlalelo, bese ukhetha inketho Yombhalo kumenyu yokudonsela phansi. Faka umbhalo bese ukhetha Kulungile.
Ngenxa yokuthi umbhalo omisiwe uzoba mncane kakhulu, uma ufuna ukusondeza eduze, sebenzisa ihange ekhoneni elingezansi kwesokudla, khetha iphoyinti lokunamathisela ekhoneni eliphezulu kwesokudla ukuze uguqule isiqondiso sombhalo.
Uma ungayithandi ifonti ezenzakalelayo, ungacindezela inkinobho ethi Aa ukuze ukhethe enye ifonti. Ungakwazi futhi ukwengeza eminye imithelela yombhalo efana neShadow, Brilliant, Background Color… ngaphansi kwalokhu kulungiselelwa.
Uma ufuna ukushintsha umbala wombhalo, khetha ichashazi elimhlophe phezulu kwesokudla sesikrini sokubonisa.
Engeza umculo kuvidiyo
Ungangeza umculo ukuze wenze ividiyo ihehe futhi ihehe. Ngengoma etholakala kudivayisi yakho, ungayifaka ngokubeka ikhesa lapho ufuna ithrekhi iqale khona. Okulandelayo, cindezela inkinobho yomsindo.
Iwindi lokubonisa ingoma lizovela. Vele ukhethe, cindezela inkinobho yokuhlanganisa futhi igama lengoma lizovela emugqeni wesikhathi.
Chofoza inkinobho yokwabelana kwesokunxele ngemuva kokuthi uqedile ukuhlela ividiyo. Bese ukhetha ikhwalithi yevidiyo, ekugcineni uchofoze okuthi Thumela.
Qaphela: Inguqulo yamahhala ye-Kinemaster izofaka ngokuzenzakalelayo i-watermark ekhoneni eliphezulu kwesokudla sevidiyo. Ungasusa lokhu kuphela nge-Kinemaster Premium.
Xem Thêm Cách đăng nhập WhatsApp Web cực đơn giản và nhanh chóng | Muasalebang
Ufuna amafoni ekhwalithi anamakhamera anokucaca okuphezulu. Uma ufuna ukuqopha izithombe ezinhle ngesikhathi seholide lasehlobo elizayo, sicela ubheke ngokushesha amamodeli efoni analezi zinhlobo ezilandelayo: Ifoni ye-iPhone, Samsung amafoni, Amafoni e-OPPO, Ifoni ye-Xiaomi… eNguyen Kim. Siyaziqhenya ngokuhlinzeka njalo ngezinhlobonhlobo zemikhiqizo ye-elekthronikhi, Impahla yasendlini Iyiqiniso elinezisusa ezikhangayo, iwaranti yezwe lonke.
Isizinda Sesibonelo – Imibuzo Evame Ukubuzwa(FAQ)
1. Ingabe i-KineMaster ingafakwa ku-iPad?
Ungafaka futhi usebenzise i-KineMaster kuma-iPads ngamasistimu wokusebenza angu-12.4 noma kamuva.
2. Yimuphi umkhawulo omkhulu wokuthekelisa amavidiyo kuhlelo lokusebenza lwesilingo se-KineMaster?
Enguqulweni yamahhala iKineMaster ivumela abasebenzisi ukuthi bakhiphe amavidiyo anomthamo omkhulu ongu-13GB.
3. Indlela yokufaka i-KineMaster kukhompyutha ephathekayo noma ideskithophu?
Ukufaka i-KineMaster kukhompuyutha yakho ephathekayo noma ikhompuyutha, kufanele usebenzise i-emulator ye-Android ukuze ukwazi ukusebenzisa lolu hlelo lokusebenza. Ukuze uthole imininingwane yokuthi ungalanda kanjani, sicela ubheke isihloko esingenhla.
Ungayifaka kanjani i-KineMaster Pro kumafoni we-Samsung?
Okokuqala, yiya ku-CH Play. Faka usesho lohlelo lokusebenza lwe-“Kinemaster”. Chofoza inkinobho ethi Faka ukuze udawunilode uhlelo lokusebenza efonini yakho.